भेला र निश्चित गर्दा पानी ड्रेनेज सिस्टम सरल देखिन्छ र स्थापनाको लागि धेरै प्रयास आवश्यकता छैन। तथापि, बांधनेवाला तत्व को slightest विचलन डिजाइन वा हटाइ मात्र स्थापना बेकारी बनाउन, तर पनि घरमा हानिकारक। खुसीको कुरा, आजको निर्माताहरु जो मार्फत सरल यस्तो प्रणाली, को-गर्न-सजिलो स्थापना र विश्वसनीय घटक विकसित गर्दै छन् Gutters को स्थापना र सँगैको तत्व। तर हेरविचार र शुद्धता स्थापना को समयमा, माथि राम्ररी गणना द्वारा, उच्च गुणस्तरीय स्थापना प्रदान गर्न सक्छन् ब्याक।
को नाली लागि सामाग्री
परम्परागत सामाग्री को ड्रेनेज सिस्टम प्रदर्शन गर्दै छन् जो बाट, एक धातु प्रोफाइल। उहाँले यस्तो संरचना लागि सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम छ। यो बल विशेषताहरु, र लचीलापन स्थापना र स्थायित्व मा। तर यो समाधान को कमियां छन्। नाली प्रोफाइल चयन, गर्नुपर्छ इस्पात ध्यान, जस्ती वा अन्तिम प्रक्रिया Polymeric कोटिंग। कुनै कुरा कुनै पनि बन्धन नाली कसरी सुरक्षित, जंग क्षति सबै भेला हुनु प्रयासहरु nullify थियो। तसर्थ, धातु प्रोफाइल को मामला मा सुरक्षा तह आवश्यक छ।
प्लास्टिक को लाभ को सूचीमा सापेक्ष पनि धेरै। तिनीहरूले कारण सजिलो स्थापना र वर्षा मा सामाग्री को शान्त सञ्चालन गर्न निजी घरहरू को मालिक सार्न थाले। सापेक्ष शक्ति र प्लास्टिक guttering को स्थायित्व व्यावहारिक धातु गर्न मान्नु छैन। तर, परमवीर चक्र र बेफाइदा छ। सामाग्री गर्मी को कार्य अन्तर्गत विस्तार, त्यसैले फिक्सिंग अंक प्रदान गर्नुपर्छ रबर छाप।
Gutters कसरी फिक्सिंग छ?
मुख्यतया विशेष हुक, कोष्ठक यो कार्य को लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, बन्धन नाली गर्त यस्तो तत्व को माध्यम द्वारा धेरै भागहरु मा गरिन्छ:
छत को ढलान साथ निर्देशित छ जो eaves, गर्न फिक्सिंग;
एक rafter निर्माण वा चरम furring तत्व;
को काठ फर्श को आधार गर्न।
स्थापना के हुक हात गणना गर्नुपर्छ अघि। miscalculate छैन क्रममा, यो समायोज्य तत्व खरिद गर्न सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूले धातु deforming बिना पूरा गर्न नाली वस्तुतः कुनै पनि ढलान बन्धन प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि बांधनेवाला को रंग र आकार ध्यान गर्नुपर्छ - यो शैली मोहरा सामना गर्नेछ।
निर्माण लागि कोष्ठक को विविधता
ड्रेनेज सिस्टम लागि structurally कोष्ठक को जुदाई सन्दर्भमा यो ठूलो महत्व छ। यो विकल्प को विशुद्धता डिजाइन को विश्वसनीयता र कार्यक्षमता मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले, फिक्सिंग नाली कोष्ठक निम्न प्रकार को गर्न सकिन्छ:
अगाडि तत्व। यस्तो फास्टनरों स्क्रू संग बोर्डहरू हावा स्क्रूड। स्थिति कोष्ठ कोणात्मक वा ठाडो स्थिति हुन सक्छ - यो छत कटौती गरिएको छ कसरी निर्भर गर्दछ।
समतल घुमेको कोष्ठक। निर्धारण भएको ट्रस निर्माण वा crate गर्न बोर्डवक गर्न बाहिर छ। यसलाई सधैं छ छैन जो सम्भव उदाहरणका लागि, तपाईं crate गर्न प्रतिबद्ध जब माउन्ट चरण, सामना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
स्थापना गर्न फ्लैट पक्ष कोष्ठक। को छत छेउमा छत नाली गर्न fastened यो बांधनेवाला संग।
विश्वव्यापी कोष्ठ। वास्तवमा, नाम नै लागि बताइएको - को बांधनेवाला यस प्रकारको को छत, battens तत्व, फर्श गर्न संरचना समाधान गर्न, वा बोर्ड हावा गर्न अनुमति दिन्छ।
को हिउं पग्लनु समयमा तिनीहरूले हिउँ छत तल स्लाइड को वजन सामना गर्न सक्षम थिए यस्तो तरिकाले Gutters उन्मुख हुनुपर्छ। नामित निर्धारण कोष्ठक टुकी दुई इन्च र कुनै थप हुनुपर्छ। यस भाग को चिप्लेटी पाइप को परिसर देखि उत्पादन गरिनेछ। चरम बांधनेवाला तत्व 15 सेमी द्वारा छत को किनारा बाट टाढा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। छत नाली गर्न प्रदर्शन निर्धारण गर्नु अघि, तपाईं extensor हतियार माउन्ट गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले त्यसपछि यो नाली को एक ढलान एक लाइन आकर्षित गर्न एक मार्कर प्रयोग आवश्यक छ, छेउमा पक्ष राखिनेछ। प्रत्येक क्लिप जहाँ निशान मार्कर बायाँ थियो बिन्दुमा बाङ्गो छ। त्यसपछि, योजना गर्न विधानसभा अनुसार।
लागि Gutters तथाकथित झुकाव पनि प्रदान गर्नुपर्छ। यसलाई पूर्वाग्रह सापेक्ष छ drainpipes, आफ्नो दिशा मा IE। यो गणना खण्ड Gutters र पिच लम्बाइ आधारमा बनेको छ। एक मीटर, यो विचलन देखि 0.52सेमी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, र्याम्प को तेर्सो लम्बाइ हुनेछ भने 8 मिटर, अन्य एक हात ले स्तर मा फरक4सेमी हुनेछ। यदि र्याम्प को लम्बाइ 12 मिटर भन्दा बढी, केही अवस्थामा, फिक्सिंग जल दुई दिशामा एक पूर्वाग्रह संग गरिन्छ। छत को एक पक्ष पानी जल लागि धेरै पाइप छ जब यस्तो कन्फिगरेसन हुन्छ। जरूरी स्थापना विशुद्धता तेर्सो eaves एक पूर्वाग्रह अनुपालनको छ।
धेरै यो दूरी छोटो बचत गर्न स्थापना कोष्ठक 0.7 मिटर गर्न 0.4 को वृद्धिमा मा गर्न सकिन्छ। क्रममा, तर यो समाधान विश्वसनीयता को मामला मा खतरनाक छ। तथ्यलाई राम्रो नाली बिना समर्थन मोड र हिउँ भार अन्तर्गत deform गर्न सक्ने छ। यस सन्दर्भमा, प्लास्टिक Gutters बलियो, यद्यपि, र तिनीहरूलाई लागि त्यहाँ अधिकतम लोड को सीमा छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण भएको छत गर्न स्थापना कोष्ठक - यो अधिकतम चिप्लेटी को स्तर धान्न छ। स्थापना अघिल्लो एक प्रत्येक क्रमिक तत्व नातेदार को तल र्याम्प को दिशा मा बाहिर छ। को ट्रस संरचना र crate सेट गरिएका छन् जो Mountings, पहिले तपाईं ramps तडक द्वारा सुरक्षित थियो सही गर्न उपयुक्त फारम अन्तर्गत मोड गर्न आवश्यक छ।
पाइप लागि धारकों स्थापना
विशेष धारकों प्रयोग गरेर भवन को पर्खाल गर्न नाली पाइप को fixation सुनिश्चित गर्न। यो तत्व को एक उपकरण घर को पर्खाल गर्न माउन्ट नाली प्रदान गर्नेछ जो एक क्लंप र पेच लागि प्रदान गर्दछ। होल्डरलाई पाइप जडान जुन सबै Bells अन्तर्गत राखिएको हुनुपर्छ। प्रयोग सीधा खण्डहरूमा र लामो पाइप भने, कस्नु को स्थापना हरेक2मीटर प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
यो काठ र ईटा को पर्खाल को लागि यो वाहक को विभिन्न मोडेल प्रयोग गर्न आवश्यक छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, ईटा लागि प्लास्टिक dowel एक स्क्रू शामिल लेख चयन गर्नुपर्छ। यस मामला मा यो बन्धन तत्व जो मार्फत स्थापना होल्डर प्रभावित हुनेछ लागि प्वाल बनाउन आवश्यक छ।
तपाईं एक काठ घरमा नालियों को स्थापना योजना भने, माउन्ट Clamps मनमोहक स्क्रू संग विशेष छड वा प्लेट को मद्दतले पूरा गर्न छ। यो काठ आधार कम विश्वसनीय मानिन्छ छ, त्यसैले तपाईं एक ठूलो क्षेत्र को कब्जा संग परिचय वा गुप्तवास माउन्ट वा स्थापनाका लागि प्रदान गर्न आवश्यक छ। को विश्वसनीयता वृद्धि गर्न पनि drainpipes गर्न धारकों लागू assembling गरिनेछ भविष्यमा जो सहायक प्यानल सेट गर्न सिफारिस गरिएको छ।
"Pinotex अल्ट्रा": विवरण र संरचना को आवेदन
Hatches धुआं: प्रकार, कार्य, स्थापना
एक निर्माण कम्पनीको संरचना: व्यवस्थापन, ईन्जिनियरहरु र कामदारहरूलाई। भवन भरोसा
को trapezoidal पाना को न्यूनतम छत पिच: अनुज्ञेय मापदण्डहरू, विशेष गणना र सिफारिसहरू
पेन्जा मा डाक्टर Dapertutto थियेटर
UniCredit बैंक: समीक्षा, वर्णन, लाभ
विमान "Transaero": चार्टर उडान - लामो यात्रा एउटा सानो शुरुवात
को विशेषण के हो?
इवान Emelianenko: एक जीवनी। सबै भन्दा राम्रो झगडे
कसरी मोड्युलको हृदय बनाउन दुई तरिकामा
आवाज रिकर्डर सोनी आईसीडी PX333: वर्णन, परिचालन निर्देश, समीक्षा
वाइकिंग्स: युरोपियन संस्कृति मा नर्मन्स ले कस्तो ट्रेस छोड्यो
ओवन मा व्यञ्जन फर्सी - एक स्वस्थ र स्वादिष्ट भोजन